Kitra – “Telma coupe de Mada” : tsy hanaiky fa hiakatra kianja koa ny FC Rabaza | NewsMada
Kitra – “Telma coupe de Mada” : tsy hanaiky fa hiakatra kianja koa ny FC Rabaza
Tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny komisiona fitsipi-pifehezan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra, ny FC Rabaza, ka nanao forfait” azy ireo ary nanome rariny ny Cosfa, eo amin’ny fiadiana ny “Telma coupe”.
Nanambara, tamin’ny alalan’ny famoriana ny mpanao gazety, teny amin’ny foibe toerany teny Ambanidia, omaly, Ramilison Guillaume, filohan’ny klioba FC Rabaza fa tsy mitombina ny fanaovana “forfait” azy ireo, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara. Fanapahan-kevitra navoakan’ny komision’ny fitsipi-pifehezana(Codis) eo anivon’ny federasiona, momba ny fitorian’ny Cosfa, amin’ireo mpilalao ao aminy. “Efa namaly io fitoriana io izahay, ary miandry ny valiny ankehitriny. Raha toa ka tsy mahafa-po anay izany, hidina any Fiarantsoa ny FC Rabaza, amin’ny alakamisy ary hiakatra kianja koa amin’ny alahady, ho avy izao”, hoy izy. Nomarihiny kosa fa tsy tompon’antoka amin’ny mety hitranga ny tenany.
Raha tsiahivina, nitranga ny olana, nandritra ny lalao ampahavalon-dalana, natao ny 23 septambra lasa teo, ka nibatany ny fandresena, nanoloana ny Cosfa. Nametraka fitoriana tamin’ireo mpilalaony efatra mirahalahy ahitana an’i Yvan, Jimmy, Nocé ary i Lila, ny miaramila taorian’io, milaza fa tsy misy taratasy fifindrana.
Vonona hifanandrina amin’ny FC Ilakaka
Nomarihin-dRamilison Guillaume, fa tsy nanaraka ny lalàna mifehy ny baolina kitra, ny fitoriana nataon’ny Cosfa, satria efa taorian’ny lalao vao nanao izany izy ireo, ary tsy nisy sonia akory izany sady tsy natrehin’ny filohan’ny klioba sy ny kapiteny. Ny vola sandan’izany koa tsy nomen’ny Cosfa raha tsy iray andro, taorian’ny lalao.
Ankoatra izany, nilaza izy fa tsy ilàna taratasy fifindrana iraisam-pirenena (CTI), ny amin’i Yvans sy i Jimmy satria efa navelan’ny klioba hilalaovany ary tsy fiadiana ny ho tompondaka fa amboara ny natao, midika fa misokatra ho an’ny mpilalao rehetra na avy aiza na avy aiza. “Tsy tokony handeha io ampahefa-dalana io, raha tsy manome valiny anay ny Codis”, hoy i Guillaume. Mandra-piandry izany, manohy ny fanazarantenany hatrany ny FC Rabaza ary manantena fa hiatrika ny ampahefa-dalana, amin’ny FC Ilakaka izy ireo.
Une réponse à "Kitra – “Telma coupe de Mada” : tsy hanaiky fa hiakatra kianja koa ny FC Rabaza"
RANAIVO FRANCO 11/10/2017 à 16:32
ataovy mangarahara lay baolina kitra ary ataovy izay mifanaraka @ lalana mifehy lalao sy ny mpilalao fa aza asina fiangarana zany e.fa tsy mampandroso ny kitra gasy e.